Seychelles dia mitondra masoandro sy nofinofin'ny fandosirana sambatra ho any Frantsa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles dia mitondra masoandro sy nofinofin'ny fandosirana sambatra ho any Frantsa
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Mandray vahiny avy any Frantsa i Seychelles
Ny fahitana sy ny feon'i Seychelles dia namely ny tsena Frantsay tamin'ny hery feno tamin'ny alàlan'ny fanentanana amin'ny fantsona maro nokarakarain'ny Tourism Seychelles. Ny fampielezan-kevitra, izay nanomboka tamin'ny volana septambra, dia mandeha mandritra ny efa-bolana izay mitondra masoandro mibaliaka, toerana miavaka ary nofinofy momba ny hafanan'ny nosy tsy fahita firy any amin'ny Ranomasimbe Indianina mankany Frantsa satria ity tsenan'ny fizahantany manan-danja ity dia mankany amin'ny fararano sy ririnina.
Natomboka hampitombo sy hanatsara ny lazan'ny toerana haleha eo amin’ny tsena frantsay, ny tetikasa dia ampahany amin'ny drafitra fifandraisana midadasika izay hampiasa sehatra fampitam-baovao isan-karazany handefasana hafatra mafonja fa misokatra i Seychelles, ary fandraisana ireo mpitsidika frantsay, Ramatoa Bernadette Willemin, Tale Jeneralin'ny Marketing Destination, ao amin'ny Tourism Seychelles.
“Nanomboka ny fampielezan-kevitra miasa any an-tampony izahay, alohan'ny hanombohan'ny sidina Air France mankany Seychelles, satria mila hita ny toerana halehanay hanasana ireo vahiny frantsay hiverina any amin'ireo nosy. Fantatray ny fahasarotan’ny dia amin’izao fotoana izao ary amin’ny alalan’ny ezaka ataonay dia mikendry ny hanentana ny mpitsidika betsaka indrindra izahay hifidy an’i Seychelles amin’ny fialan-tsasatra manaraka any ivelan’ny firenena, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny fararano-ririnina izao”, hoy Ramatoa Willemin.
Tamin'ny faran'ny volana septambra sy nandritra ny herinandro, maherin'ny 38,530,342 ny mety ho mpandeha no efa afaka nahita ireo toerana malaza ao amin'ny nosy La Digue, noho ny takela-by 1,200 teo amin'ny lampihazo 1200 gara any Paris, ny manodidina azy ary ny Faritany.
Nifindra tamin'ny 20 septambra ka hatramin'ny 19 oktobra 2021 ny fampielezan-kevitra, nifindra tany amin'ny Radio Europe 1 - iray amin'ireo onjam-peo dimy ambony indrindra any Frantsa izay mandefa amin'ny ampahany miteny frantsay any Belzika sy Soisa - amin'ny alàlan'ny fandefasana 42 eo ho eo. toerana mandeha mandritra ny efatra herinandro ary mikendry mpanatrika 12 tapitrisa. Ireo toerana, nalefa nandritra ny fotoana voalohany, dia namela an'i Seychelles hampitombo ny fahitana azy ho toerana mora idirana izay ahafahan'ny olona mivezivezy milamina na dia eo aza ny areti-mifindra.
Tsy navelan'ny ekipan'ny Tourism Seychelles avy eo nitondra ny mpijery ny fahitalavitra BFT tamin'ny alàlan'ny fandefasana toerana 20 segondra izay mandeha isan'andro mandritra ny roa herinandro ny 1-14 Novambra. Ity fizarana amin'ny fanentanana ity dia mikendry ny hamoaka an'i Seychelles amin'ny famirapiratany rehetra ho hitan'ny mpijery na ho nofinofisina, miaraka amin'ny fitambaran'ny toerana 70 mikendry ny fifandraisana eo amin'ny 21.2 tapitrisa eo ho eo amin'ny 15 taona no ho miakatra.
"Rehefa voa mafy nandritra ny roa volana voalohany tamin'ny fampielezan-kevitra izahay, dia matoky izahay fa ny ezaka ataonay dia nahatratra ny tanjony amin'ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika momba ny toerana haleha, ary manantena ny fitomboan'ny varotra sy ny fitomboan'ny famandrihana amin'ny vanim-potoanan'ny fety," hoy Ramatoa Ramatoa. Willemin.
Nanoro hevitra ihany koa izy fa ny fampielezan-kevitra izao dia nanova ny fifantohana amin'ny fampiasana sehatra nomerika sy ny tatitra maro an-gazety; ny fanentanana dia nanao ny fomba rehetra mba hiresahana manokana amin'ny mpandeha tsirairay, ireo izay mikasa ny hikaroka toerana vaovao amin'ny sehatra manokana kokoa, toy ny MICE, fampakaram-bady na antsitrika.
Tatitra amin'ny fahitalavitra maromaro no andrasana amin'ny herinandro ho avy, indrindra ao amin'ny fantsona TF1, Arte ary TV5 Monde hanehoana ny kolontsaina sy ny tantaran'i Seychelles, ny sakafo ara-tsakafo, ary ny fiarovana ny tontolo iainany.
Amin'ny alalan'ity fanentanana goavana ity, ny vondronosy Seychelles dia mikatsaka ny haneho tsy ny hakantony miavaka ihany fa ny maha-azo itokiana azy, ny fahasamihafan'ny lova voajanahary sy ara-kolotsaina ary indrindra indrindra, ny fandraisana mafana avy amin'ny mponina ao aminy.
Seychelles dia efa nandray mpitsidika 152,345 nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2021, anisan'izany ny mpitsidika frantsay 14,652, izay mametraka an'i Frantsa ho tsenam-pizahantany loharano fahefatra. Hatramin'ny nahatongavan'ny Air France tamin'ny o, France no nitarika ny fahatongavan'ireo mpitsidika isan-kerinandro tany Seychelles nandritra ny efatra herinandro.
Ny fepetra takiana farany amin'ny fidirana sy ny fomba fiasa ara-pahasalamana ary koa ny lisitr'ireo mpandraharaha manana fahazoan-dàlana amin'izao fotoana izao dia hita ao amin'ny tranokala Tranonkalan'ny Ministeran'ny Fizahantany.